Maxkamadda sare ee magaalada London waxaa ka socota dacawad u dhaxaysa dawladda Djibouti iyo ganacsadaha maal-qabeenka ah ee Cabdiraxmaan Boreh oo dawladda Jabuuti ay ku eedaynayso in uu ku lug lahaa musuq-maasuq baahsan intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2008.
Waxyaabaha ay dowladda Jabuuti ku eedeyneyo Boreh waxaa ugu weyn saddex arrin oo kala ah; xiriirkii uu la lahaa shirkada Horizon Terminal Oil, lahaanshaha shirkaddiisa Sopreme, iyo heshiis uu la galay shirkadda DP World.
Marka saddexda arrin la isku geeyey, waxa ay dowladda Jabuuti sheegnayesaa in waxyeelada uu gaarsiiyey Boreh iyo lacagta uu lunsaday ay gaareyso boqol milyan oo dollar.
Boreh, oo ay VOA-da la xiriitay waa uu ka gaabsaday inuu arrintan iyo eedeymaha loo jeedinayo ka hadlo.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la kulmay Mark Handley oo ka tirsan garyaqaanada Gibson Dunn oo dawladda Djibouti ku matalaya maxkamadda sare, waxaana ugu horrayn uu weydiiyay eedaymaha ugu waaweyn ee dawladda Djibouti ay ku haysato Cabdiraxmaan Boreh.
Dhageyso Wareysiga Maxkamadeynta Boore
Israa'iiliyiin Lagu Dilay Weeraro Mindiyeen ah